नेपालबाट के-के सामान बाहिर पठाउन मिल्दैन? – MySansar
नेपालबाट के-के सामान बाहिर पठाउन मिल्दैन?
Posted on April 3, 2018 March 30, 2018 by Salokya
त्यसो त नेपालले बाहिर सामान पठाउने भन्दा पनि बाहिरको सामान नेपालमा धेरै ल्याइन्छ। नेपालबाट बाहिर पठाउने सामानहरु निकै कम हुन्छन्। नेपालबाट बाहिर पठाउन नमिल्ने सामानहरु पनि छन्। के के सामाननेपालबाट निकासी गर्न पूर्ण बन्देज लगाइएको छ त?
क)पूरातात्विक, ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्वका वस्तुहरु
५) यार्सागुम्वा र कुट्की
६) सुनगाभा÷जिवन्ती, रक्त चन्दन
ज) पेट्रोलियम पदार्थ
४) एल.पी. ग्यास
५) हवाई इन्धन (अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा संलग्न हुने वायुयानले प्रयोग गर्ने इन्धन वाहेक)
तेस्रो मुलुकबाट आयातित सामान अन्य मुलुकमा निकासी गर्न पाइन्छ, पाइदैन ?
भारत बाहेक अन्य तेस्रो मुलुकमा निकासी गर्न कुनै बाधा छैन ।
नेपालबाट चामल निर्यात गर्न सकिन्छ कि सकिंदैन ?
निकासीमा परिमाणात्मक बन्देज लागेका वस्तुहरुको सुचीमा चामल पर्ने हुँदा बाणिज्य ब्यबस्थापन विभागको इजाजत लिएर मात्र चामल निकासी गर्न सकिन्छ ।
Biological Fluid निकासी गर्न सकिन्छ, सकिदैन ?
उक्त वस्तु निकासी गर्न प्रतिबन्ध लागेको छैन । निकासीका लागि तोकिएका प्रक्रियाहरु पूरा गरी निकासी गर्न सकिन्छ ।
हवाईजहाज, हेलिकप्टर वा तिनको इन्जिन मर्मत लागि बिदेशमा लैजादा के कति धरौटी राख्नु पर्दछ ?
यस्ता मालवस्तु मर्मतका लागि बिदेशमा लैजानु परेमा सम्बन्धित बायुसेवा कम्पनीको जमानीमा भन्सार अधिकृतले बिनाधरौटी लैजान दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
(स्रोत : भन्सार विभाग)
1 thought on “नेपालबाट के-के सामान बाहिर पठाउन मिल्दैन?”
ख) अनुसार मेरा कुनैपनि साथीहरु विदेश जान नपाउने भए…